ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ဘေဘီလေးရဲ့ကန်ချက်ကနေ ပြောပြနေတဲ့အရာ (၁၀)ချက် - Chit MayMay
Home Lotaya ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ဘေဘီလေးရဲ့ကန်ချက်ကနေ ပြောပြနေတဲ့အရာ (၁၀)ချက်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ သူမ မကြာခင်မွေးဖွားလာမယ့် ကလေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး သိလိုစိတ်ပြင်းပြတာက သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးဘယ်လိုနေမလဲ? ယောက်ျားလေးလား၊ မိန်းကလေးလား? စတဲ့ ဒီလိုမေးခွန်းတွေကို တခါတရံမှာ အထရာဆောင်းအကူအညီဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်။ မေမေတို့မှာ တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုပိုပူလာတဲ့ ဗိုက်ကလေးကို ပွတ်ပြီး ဗိုက်ထဲက ကလေးသေးသေးလေးကို စကားပြောချင်တဲ့ အချိန်တွေ ရှိမှာပါ။ ဗိုက်ထဲက ဘေဘီလေးက မွေးဖွားပြီးတဲ့အထိ စကားမပြောနိုင်သေးပေမယ့် အထဲကနေကန်ပြီး မေမေတို့စကားကို ကြားကြောင်းပြသပါလိမ့်မယ်။ ဒီကန်တာက မေမေတို့ကို ပြောတဲ့ လျှို့ဝှက်ဘာသာစကားနှင့်တူပြီး သင့်ရဲ့ကိုယ်ဝန်သမိုင်းမှတ်တိုင်က ဘယ်လောက်ထိ အောင်မြင်ခဲ့တာကို ပြောပြနေပါတယ်။ မေမေတို့ ဘေဘီလေးကန်ခြင်းမှတဆင့် မေမေတို့ ကိုယ်ဝန်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ပြောပြနေတဲ့အရာအနည်းငယ်ရှိပါသေးတယ်။
၁။ ကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေး
ကန်တယ်ဆိုတာ မေမေတို့ကလေးလေး ကျန်းမာနေကြောင်း ပြသတာပါ။ တကယ်လို့ မေမေတို့ကလေးဟာ ဘောလုံးကစားသမားတစ်ယောက်လို တတ်ကြွစွာ ကန်နေပါက ကလေးလေး ကြီးထွားလာခြင်းနှင့် တတ်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်လာခြင်းကို ဆိုလိုတာပါ၊ ဒါက ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း ပြသနေပါတယ်။
၂။ မေမေစားတဲ့ အစားအစာရဲ့ အရသာ
အစပ်တစ်ခုခုစားတဲ့အချိန်တိုင်း သင့်ဘေဘီလေးဆီကနေ ဆတ်ခနဲကြမ်းကြမ်းကန်တာကို ခံစားဖူးပါသလား? အကြောင်းက ဘေဘီလေးတွေဟာ အများအားဖြင့် စပ်တဲ့အစားအစာကို မကြိုက်ကြတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မေမေတို့ တစ်ခုခုစားတဲ့အချိန်မှာ ဘေဘီလေးက ရွင်လန်းစွာကန်နေရင် မေမေတို့စားတဲ့ အစာက အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီး အရမ်းအရသာရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘေဘီလေးက ဒါကို ပိုတောင့်တပါတယ်။
၃။ ကလေးရဲ့ အရွယ်အစား
သင့်ဘေဘီလေးဟာ မကန်ခင်မှာ ယုန်လေးတွေ၊ ကြောင်လေးတွေ အိပ်နေသလို အခွေလိုက်လေးသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆရာဝန်တွေဟာ ကလေးကို ခေါင်းကနေ တင်ပါးအထိသာ တိုင်းတာလို့ရပါတယ်။ သို့သော် ကန်တဲ့အချိန်ကစပြီး၊ ကလေးရဲ့ အရွယ်အစားက ကြီးထွားလာပြီဆိုရင် ခေါင်းကနေ ခြေချောင်းအထိ တိုင်းတာလို့ရပါပြီ။
၄။ ဘေဘီလေးက မေ့မေ့အသံကို နားထောင်နေတာပါ
ကိုယ်ဝန် ၁၈ပတ်မှာ ကလေးရဲ့နားရွက်ဟာ နှစ်ဖက်စလုံး စထောင်လာပြီး အကြားလည်း ဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်။ တကယ်လို့ မေမေတို့က ဒီအချိန်မှာ ကလေးကို စကားပြောပေးနေပြီး ကလေးကလည်း ကန်ပြီးတုံ့ပြန်တယ်ဆိုရင် ကလေးက မေ့မေတို့အသံကို အမှန်တကယ် နားထောင်နိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
၅။ ကိုယ်ဝန် ဒုတိယသုံးလပတ် စတင်ခြင်း
ကလေးဟာ ကိုယ်ဝန် ၁၆ပတ်မှ ၂၅ပတ်အကြား ပထမဆုံးတစ်နေရာကို စကန်ရပါမယ်။ ဒီကန်ချက်က သိပ်မသိတာကြောင့် တောင်ပံခတ်သလို ခံစားရတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ လေပွတာနဲ့တောင် မှားယွင်းစေပါလိမ့်မယ်။ ထိထိရောက်ရောက် ကန်နိုင်ဖို့ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမသိမသာကန်ချက်က သင့်ကိုယ်ဝန်ရဲ့ ဒုတိယသုံးလပတ်ရဲ့အစကို ရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ဆရာဝန်တွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေကို ဘေဘီလေးတွေ အကြိမ်ရေဘယ်လောက် ကန်တယ်ဆိုတာကို မေးတတ်ကြပါတယ်။ သို့သော် ကလေးကန်တာတွေ သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားပါက တစ်ခုခုမှားယွင်းနေကြောင်း မိခင်ကို ကလေးဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- မိခင်မှာ စိတ်ဖိစီးနေ၊ စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ။ ဒီအချိန်ဟာ ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းတွေ့ရမယ့် အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ ကိုယ်ဝန် တတိယသုံးလပတ်
ဒုတိယသုံးလပတ်အတွင်းမှာ ကလေးရဲ့ ကန်ချက်က ပုံမှန်ဖြစ်သော်လည်း တတိယသုံးလပတ်မှာ သူတို့ရဲ့ကန်ချက်က ပိုပြင်းထန်လာပါတယ်။ မကြာခဏ ကန်လာကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သင့်ခင်ပွန်းနှင့် ဆွေမျိုးတွေက သင့်ဝမ်းဗိုက်ပေါ် လက်တင်ပြီး ကလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဝမ်းဗိုက်ကို လက်နှိပ်ဓါတ်မီးနဲ့ ထိုးကြည့်တဲ့အခါ ကလေးဟာ လှုပ်ရှားပြီး ကန်ပါတယ်။ ရက်သတ္တပတ် ၃၃မှာ ကလေးရဲ့သူငယ်အိမ်ဟာ အလင်းကို တုန့်ပြန်တဲ့ အရွယ်အစား ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာက သင့်ကလေးဟာ အလင်းကို မြင်နိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
၉။ အိပ်ပျော်ရာက နိုးလာလို့
ကိုယ်ဝန် ၂၅ပတ်မှာ ကလေးဟာ အိပ်စက်ဖို့ သင်ယူပြီးပါလိမ့်မယ်။ REM (Rapid Eye Movement) အိပ်စက်မှုမှာ အချိန်ပိုကုန်လာပါတယ်။ သူအိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ မကန်ပါဘူး။ ဗိုက်ထဲမှာ လှုပ်လာပြီ၊ ကန်လာပြီဆိုရင်တော့ ဘေဘီလေးနိုးလာတဲ့ လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ အမြဲတမ်း ကန်မှာမဟုတ်ပါဘူး
လှုပ်ရှားမှုတိုင်းက ကန်တာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ သင်ဟာ နှေးတယ်လို့ ခံစားရပြီး စက္ကန့် ၃၀ ကျော်ကြာမြင့်တဲ့ စည်းချက်နဲ့ ကန်ခြင်းတွေဟာ ကလေးကြို့ထိုးနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့နည်းတူ ကလေးငယ်ဟာ သေးငယ်ဆဲ (သို့) အက်မီယိုစ်အိတ်အတွင်းမှာ အခန်းအလုံအလောက်ရှိဆဲဆိုရင် သူတို့ကိုယ်ကို လှည့်တာ (သို့) ကျွမ်းထိုးတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Previous articleအမေနှင့် သမီးတွေကြားထဲက ပြောဆိုဆက်ဆံမှုအတွက် သိကောင်းစရာများ
Next articleဒီမိုကရေစီအခြေခံသော မိဘအုပ်ထိန်းမှုဆိုတာ ဘာလဲ? ဘယ်လိုကျင့်သုံးနိုင်မလဲ?
ရိုသေလေးစားမှုမရှိတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲ?
ကလေးငယ်တွေကို နို့ချိုတိုက်ကျွေးနေရချိန်မျိုးမှာ ငှက်ပျောသီးစားသုံးပါက ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးများ
Nandar Lwin - July 10, 2020 0